Casa Colorines 'Secret Garden close to the beach' - I-Airbnb
U-Lilian uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
I-Secret Garden iyindawo eqhelelene kahle enezitshalo nezihlahla zasezindaweni ezishisayo lapho ungaphumuza khona futhi uphumule ngenkomishi yekhofi lendawo ekuseni kakhulu, uzwe izinkawu nopholi abaxoxayo futhi ubuke amathoucan noxamu abakhalayo.
Itholakala edolobheni elithulile lolwandle i-Surfside, e-Potrero, futhi i-300 mts kuphela ukuya olwandle, i-Playa Potrero, indawo yokuhlala izidleke zofudu lwasolwandle oluvikelwe imvelo.
Kunamakhabethe amabili abukekayo, ongawaqasha ndawonye noma uwahlukanise. Ngayinye iza nekhishi elihlome ngokuphelele (uhhavini, isiqandisi, umenzi wekhofi, igedlela letiye, amabhodwe e-toaster nezitsha njll.) umshini wokuwasha, i-AC, i-WiFi ne-cable TV. Amathawula, amalineni namathawula olwandle ahlinzekwa kanye nezihlalo zasolwandle, ama-coolers snorkel namathoyizi olwandle.
I-Casa de Paz inekamelo elilodwa lokulala elinombhede wendlovukazi kanye nosofa wokulala abantu ababili.
I-Casa Colorines iyistudiyo esinombhede wendlovukazi kanye nosofa wokulala abantu ababili.
Kunezindawo zokuhlala ezingaphandle ezizimele zeKhabhina ngayinye ukuze ujabulele i-zen efana nomkhathi wepharadesi lethu elihle lasezindaweni ezishisayo.
Ingadi inezindawo zokuhlala ezimbalwa ukuze izivakashi zethu zizijabulele, kanye ne-rancho eyabelwe (ivulandi elimboziwe elinokukhanya kwangaphandle namafeni) ngaphezu kwedamu lokucwilisa phansi kanye ne-BBQ egcwele.
Indawo yaseSurfside ilungile uma ufuna okuhlangenwe nakho kwangempela kwe-Costa Rica kude nesiphithiphithi sempilo yansuku zonke.
Leli dolobhana elincane laseCosta Rica linakho konke obungakudinga ngaphandle kwevayibhu yokuvakasha ngokweqile njengoTamarindo. Uzothola abantu bendawo bewusizo futhi benobungane.
I-Surf Side iyidolobha elihle elihamba ngezinyathelo ezimbalwa ukusuka ebhishi lasePotrero kanye nemizuzu eyi-10 ngemoto ukusuka emabhishi amahle kakhulu eGuanacaste njengeFlamingo, Conchal, Danta kanye neDandita Beaches. Uzothola izindawo zokudlela ezihamba phambili endaweni kanye nezitolo ezinkulu ezahlukene ukuze uthenge futhi khona kanye emnyango kukhona indawo yokudayisa izithelo lapho ungathola khona izithelo nemifino emisha nsuku zonke. Yindawo ephephe kakhulu, kodwa ngaso sonke isikhathi kufanele uqaphele ukuze ugweme iziphazamiso.
Kuhle ngaso sonke isikhathi ukuba nemoto noma inqola yegalofu, phakathi kwezitolo ezinkulu sineSuper Massai ngaphambi kokufika esiphambanweni esiya eSurfside emgwaqeni omkhulu, “El Merkado” Supermarket iseduze kakhulu neSurf Side Town kanti iDrugstore ilapho ngokulandelayo. kuyo.
Phakathi izincomo zokudlela
Isidlo sasemini nesakusihlwa
I-Hemingway (e-Costa Rica Sailing Center)
I-NASU (ehhotela i-Bahía del Sol)
I-AJI-MAHI (ukudla kwasePeruvia)
I-La Forquetta (ukudla okungcono kakhulu kwePizza nokudla kwase-Italy kuyadingeka ukugodla kusengaphambili)
PS: Izindawo zokudlela eziningi zinikeza isevisi yokulethwa.
U-Lilian, umbuki zindwendwe wakho, angakujabulela ukukusiza nganoma yiluphi ulwazi olwengeziwe.